အစိမ်းရောင် aventurine ကြည်လင်သောကျောက်အဓိပ္ပာယ်ကို။ စလင်းလင်းကျောက်တစ်ပုံစံ
Tags: aventurine, အစိမ်းရောင် aventurine
အစိမ်းရောင် aventurine ကြည်လင်သောကျောက်အဓိပ္ပာယ်ကို။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်တွင်သဘာဝ aventurine ကိုဝယ်ပါ
၄ င်း၏စလွင်ခြင်းနှင့်အပူရှိန်သို့မဟုတ်တောက်ပနေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော platy mineral mineral ပါဝင်မှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသော quartz ပုံစံသည် aventurescence ဟုခေါ်သည်။
အသုံးအများဆုံးအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သော်လည်းလိမ္မော်ရောင်၊ အညိုရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာသို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်တို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Chrome ပါ ၀ င်သည့် fuchsite (muscovite mica အမျိုးမျိုး) သည်အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်တောက်ပသောပါဝင်မှုဖြစ်သည်။ လိမ္မော်သီးနှင့်အညိုရောင်များသည် hematite (သို့) goethite ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျောက်တုံးဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကွဲပြားသည်။ ၎င်း၏တိကျသောဆွဲငင်အားသည် ၂.၆၄ မှ ၂.၆၉ အကြားရှိနိုင်ပြီး၎င်း၏မာကျောမှုသည် ၆.၅ ပတ်လည်ရှိ single-crystal quartz ထက်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။
Aventurine feldspar သို့မဟုတ် sunstone ကိုလိမ္မော်ရောင်နှင့်အနီရောင် aventurine quartzite တို့ဖြင့်ရောထွေးနိုင်သည်။ ကျောက်တုံးကိုမကြာခဏကြိုးတပ်လေ့ရှိပြီးများပြားလှသော fuchsite သည်၎င်းကိုမမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
aventurine ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအီတလီ“ ventura” လို့ခေါ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ၁၈ ရာစုအတွင်းတစ်ချိန်ချိန်တွင် aventurine ဖန် (သို့) goldstone ကိုကံကောင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အရဤကဲ့သို့ဖန်ထည်များကိုမူလက Murano တွင်မတော်တဆပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်သမားတစ် ဦး ကကြေးနီကြိုးအချို့ကိုသွန်းသော“ သတ္တု” ထဲသို့ ၀ င်စေခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ကုန်ကို avventurino ဟုခေါ်သည်။ Murano ဖန်သားပြင်မှထိုနာမည်သည်တွင်းထွက်သို့ရောက်ရှိသွားသည်၊ ၎င်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအသိမှတ်ပြုခဲ့သော်လည်းရွှေတုံးသည်ယခုအခါ Aventurine နှင့် Sunstone တို့ကိုတုပလိုက်သည်။ Goldstone ကိုသတ္တုနှစ်မျိုးမှမြင်သာမြင်သာစွာခွဲခြားထားခြင်းဖြစ်ပြီးကြေးနီသည်ကြမ်းတမ်းသောကြေးနီများဖြင့်ဖန်ခွက်အတွင်းပျံ့နှံ့သွားသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ရွှေရောင်အညိုရောင်ဖြစ်ပြီးအပြာသို့မဟုတ်အစိမ်းလည်းတွေ့နိုင်သည်။
အစိမ်းနှင့်အပြာ - အစိမ်းကြမ်းတမ်းသောကြမ်းတမ်းမှုအများစုသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်တီထွင်သူအမြောက်အများအသုံးပြုသည့် Mysore နှင့် Chennai တို့၏အနီးအနားတွင်ဖြစ်သည်။ Creamy အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်ကိုချီလီ၊ စပိန်နှင့်ရုရှားတို့တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ပစ္စည်းအများစုကိုပုတီးစေ့များနှင့်ရုပ်ပုံများအဖြစ်ထွင်းထုထားပြီး cabochons သို့ပုံစံပြုသည့်အကောင်းဆုံးနမူနာများဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်လက်ဝတ်ရတနာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
စိမ်းလန်းသော aventurine ကျောက်အဓိပ္ပာယ်သည်သာယာဝပြောမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးများနှင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်စာနာမှုမြှင့်တင်ရန်။ ဇွဲရှိရန်တိုက်တွန်းသည်။ ကျောက်သားသည် stammers များနှင့်ပြင်းထန်သောအာရုံကြောများကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ အခြားနည်းလမ်းများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင်လျှင်အတွက်အကူအညီများ။ ဒေါသနှင့်ဒေါသကိုငြိမ်းအေးစေသည်။ သုခခံစားမှုကိုမြှင့်တင်သည်။ အဆိုပါကြည်လင်အထီး - အမျိုးသမီးစွမ်းအင်ကိုချိန်ခွင်။ ဒါဟာနှလုံး၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအားပေးတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၎င်းသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချပေးပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားသောရောင်ခြည်သည်အရေပြားရောင်ခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနှင့်မျက်စိကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်အဆုတ်၊ အကှေ့၊ နှလုံး၊
အစိမ်းရောင် aventurine ၏ဝိညာဏအဓိပ်ပာယျကဘာလဲ?
စိမ်းလန်းသော aventurine ကျောက်အဓိပ္ပာယ်ကပုံစံဟောင်းများ၊ ၎င်းသည်ဘဝအပေါ်အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယုံကြည်မှုဖြင့်ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးဘဝ၏အတားအဆီးများကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်ဇွဲရှိစေသည်။
စိမ်းလန်းသော aventurine ကျောက်တုံးကိုအခန်း (သို့) အိမ်၏အရှေ့ဘက် (သို့) အရှေ့ဘက်အခြမ်းတွင်ထားပါ။ ကလေးအခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်စီမံကိန်းအသစ်စတင်မည့်နေရာကိုကျောက်တုံးဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Aventurine ကြည်လင်အဓိပ္ပာယ်ကို။ ကြွယ်ဝမှု၊ အောင်မြင်မှု၊ ကြွယ်ဝမှုနှင့်ကံကောင်းခြင်းအတွက်ကျောက်တုံးဟုလူသိများသောဤကျောက်ဆောင်တစ်လုံးသည်သင်၏အိတ်ကပ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ အကြည်ဆုံးသောပုံသဏ္formာန်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြူဖပ်ဖြူရောမှမှောင်မိုက်သောအစိမ်းရောင်အထိရှိသည်။
နေ့စဉ်စိမ်းလန်းသော aventurine ကိုဝတ်နိုင်ပါသလား။
အစိမ်းရောင် aventurine သည်ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်နှလုံးကျန်းမာရေးနှင့်ကုသမှု၊ နှလုံးခုန်နှုန်းကိုဟန်ချက်ညီစေရန်နေ့စဉ်ဝတ်ပါ။
အစိမ်းရောင် aventurine ဆိုတာဘာလဲ?
နှလုံးချကာရာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အစိမ်းရောင် aventurine သည်စိတ်ကိုအတားအဆီးများနှင့်အပျက်သဘောအတွေးပုံစံများကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသားကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်စွမ်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
သင်ဘယ်လို aventurine ဝတ်ဆင်?
သင့်နှလုံးနှင့်အနီးကပ်သွေးခုန်နှုန်းတွင် aventurine ကိုအစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ရန်အကြံပြုပါသည်။ အိပ်ပျော်နေစဉ်ပျောက်ကင်းစေရန်သို့မဟုတ်ခေါင်းအုံးအောက်တွင်အပြာရောင် aventurine ကိုတတိယမျက်လုံး Chakra ပေါ်တွင်ထားသင့်သည်။
သင် aventurine ကိုရေထဲထည့်နိုင်မလား?
ခဲယဉ်းသောကြည်လင်သောကြောင့်ရေတွင်လုံခြုံမှုရှိသည်။ အဖြစ် ရော့ခ်ကြည်လင်လင်းကျောက်, နီလာခရမ်းရောင်, smoky လင်းကျောက်, လင်းကျောက်ထ, citrineနှင်းကျကျောက်၊ agate, ဒါမှမဟုတ်ဂျက်။
အစိမ်းရောင် aventurine သည်အဘယ်အရာကိုဆွဲဆောင်သနည်း။
ကံကောင်းခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုဆွဲဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးသောကျောက်တုံးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံးသည်နောက်ကွယ်တွင်အထူးသဖြင့်သက်သာစေသောစွမ်းအင်ရှိပြီးမဖြေရှင်းနိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြthroughနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အကြံပြုသည်။
ဘယ်နေ့ရက်မှာအစိမ်းရောင် aventurine ဝတ်ဆင်ရမလဲ။
ခြုံငုံအောင်မြင်မှုအတွက်မည်သူမဆိုအစိမ်းရောင် aventurine လက်ကောက်ကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ ၄ င်းသည် horoscope တွင်အားနည်းသောမာကျူရီရှိသူများအတွက်ရလဒ်ကောင်းများရရှိစေသည်။ မည်သည့်လမဆို ၅ ရက်၊ ၁၄ နှင့် ၂၃ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသူများသည်၎င်းကို ၀ တ်ဆင်ရမည်။
သင်အစိမ်းရောင် aventurine ကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်သလဲ။
ပုံဆောင်ခဲသည်နေနှင့်ကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုမှေးမှိန်သွားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျောက်မျက်များကိုမှောင်မိုက်သောနေရာတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောအပူချိန်များကိုလည်းတုံ့ပြန်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤကျောက်မျက်ရတနာကိုနွေရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီတွင်သင့်ကား၏မထိမခိုက်စေပါနှင့်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာကိုနွေးထွေးသောဆပ်ပြာရေနှင့်နူးညံ့သောအ ၀ တ်အထည်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရတနာဆိုင်မှသဘာဝ aventurine ကိုဝယ်ပါ
Tags: aventurine, ဖန်, goldstone
Tags: aventurine, Feldspar, sunstone